भारतले नाकाबन्दी गर्दा हाईसञ्चो अनी नेपाली जनताको प्रश्नले चाहीँ किन कन्पारो ततायो प्रम ज्यु ? - USNEPALNEWS.COM
- यूस नेपाल न्युज प्रकाशित मिति: July 3, 2017
मेरो तर्फबाट आईतबार बेलुकाको साझा सवालमा देसको प्रधानमन्त्री शेर बहादुर लाई प्रश्न सोध्ने मित्र सागर ढकाल लाई सलाम छ। साथै देशको प्रधानमन्त्री जस्तो ब्यक्तिले यस्तो अभिब्यक्ति दिन मिल्छ र ? मेरो प्रश्न प्रधानमन्त्री शेर बहादुर ज्यु लाई यो छ तपाईं कस्तो ब्यक्ति हो ?
एउटा बच्चाले गुच्चा खेल्दा हारेर रिसाएको जस्तै रिसाउने? तपाईं मेरो देसको प्रधानमन्त्री भनेर मलाई भन्न पनि हिजोको साझा सवाल हेरेपछि म आफैलाइ लाजमर्दो भयो । के एउटा साधारण नेपाली जनता ले देसको प्रधानमन्त्री लाई प्रश्न राख्न नपाउने होर ? शेर बहादुर ज्यु ! होइन भने तपाईंको हिजोको हर्कत कस्तो थियो भनेर सारा नेपाली जनताहरु लाई थाहै छ र साक्षि पनि छ हिजोको साझा सवाल । पत्रकार बिध्या चापागाइ दिदीले सोधेको प्रश्नको उत्तर किन थाहा भएन हजुर लाई ?
मुङ्गलिन सडकखन्डको बाटो कहिले बनिसक्छ भन्दा तपाईं लाई लाजै नभइकन मलाई थाहा छैन भन्ने? के तपाईं सत्तामा मोज मस्तिका र आफ्नै लागि मात्रै प्रधानमन्त्री बनेको हो ? यहाँ तपाईंका समर्थक हरुले पनि निकै बिरोध गरेका छन्! म मात्रै होइन यो कुरामा बिरोधि प्रधानमन्त्री ज्यु ? के यहि हो नेपाली काङ्ग्रेसको समाजवाद र प्रजातन्त्रवाद ?
के यहि हो देसको लोकतन्त्र र गणतन्त्र? बिगतमा भारतले नेपालमा ६/७ महिने नाकाबन्दी लगाउदा तपाईंको मुखबाट एक सब्द निस्कियो? तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोली ज्यु ले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाई थर्काएका थिए । किन तपाईं लाई यस्तो बुद्धि आएन ? शेर बहादुर ज्यु! तपाईंको रिस देखियो हामी ले हिजोको साझा सवालमा एउटा साधारण नेपाली जनता लाई कसरी हप्काउनुभयो भनेर । धन्न तपाईं ले कुटपिट चाहि गर्नुभएन धन्यबाद छ तपाईं लाई यसक लागि ।
हाल, मलेसिया, केलाङ ।
चौतर्फि बिरोधपछि पछाडि हट्यो सरकार , शुक्रबारको बिदा फिर्ता